စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 549
နှစ်ပေါင်း … ငါးဆယ်
ကမာပုလဲ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၂ ကျနော်က မြစ်ကိုထားခဲ့တာလား မြစ်က ကျနော့်ကို ထားရစ်ခဲ့လေသလား မေမေရေ မေမေ့ကိုယ်စား သူ့ကိုလွမ်းတယ် …။ ခုဆို မိုးစက်တွေအောက် သူလေ အထီးကျန် … ကြေကွဲ … နွမ်းလျ လရောင်ကလည်း သူ့အလွမ်းကို မစို့မပို့နဲ့ သူ့ကို အိပ်မက်ထဲထိ လွမ်းခိုင်းနေဦးတော့မှာပဲ …။ ငါးကလေးတွေက ရေပြင်ပေါ်မှာ ပျံသန်းတယ် ငှက်ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ အရိပ်ကို ဆည်းဆာရီမှာ အာသာမပြေမှုနဲ့ အဆုံးသတ်တယ် ဒီ ပန်းချီကား ကျနော်သာ အပိုင်ဝယ်ထားလိုက်ချင်တယ် မေမေ …။ ကျနော် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ယာယီပါ မေမေရယ် တကယ့်ကို တခဏပါ နောက် တရက် နှစ်ရက်ဆို တရားဝင် ကျင်းပခွင့်မရတဲ့...
Po Htet – မြေကြီးက ရယ်သောသူ
မြေကြီးက ရယ်သောသူ ဖိုးထက်။ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၂ စင်္ကာပူ မြို့ပြနိုင်ငံငယ်လေးကို ရောက်ကတည်းက ကျနော်၏ သွားချင်၊ လာချင် စိတ်များ လျော့နည်းနေခဲ့သည်။ အရာရာမှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်၊ သွားရေး လာရေး လွယ်ကူလှပေမယ့် အလုပ်နှင့် အိမ်၊ အိမ်နှင့် မသွားမဖြစ်သွားရမည့် ကိစ္စများမှ လွဲပြီး ဘယ်ကိုမှ မရောက်ဖြစ်။ မသွားဖြစ်။ ခဏတစ်ဖြုတ် လာရောက် လည်ပါတ်ကြသော အပေါင်းအသင်း ၊ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးများ သွားသင့်သည့်နေရာများကို လိုက်ပို့၊ လမ်းညွှန်ဖြစ်ပေမယ့် မဖြစ်မနေသွားသင့်သည့် နေရာ တစ်ခုမှ မရှိဘူးလို့ ခံယူပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးထက် အနည်းငယ်သာ ပိုမိုကြီးမားသော နိုင်ငံငယ်လေးထက် ရေခံ၊ မြေခံ ပြည့်စုံလှပလွန်းသော ရွှေနိုင်ငံကြီး၏ သမိုင်းနောက်ခံ ပြည့်စုံကုံလုံကြွယ်ဝသော နေရာတွေကို...
ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၂ သမိုင်းမှတ်တမ်းလည်း ၀င်စေ …။ နောင်တော့် နောင်တော်ကဗျာဆရာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သား၊ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသူများရဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျား ရေးသားသွားခဲ့တာတွေကိုလည်း နှောင်းလူ (မျိုးဆက်သစ်) တို့ သတိထား ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြရန် ရည်ရွယ်ရင်း … လေးစားစွာဖြင့် ခင်လွန်း ဥဒါန်းမကြေ စာစောင်အား ဖတ်ရှုရန် No tags for this post. Related posts No related posts.
ငြိမ်းချမ်းအေး ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၂ ဆုံးသွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ ဂီတပညာရှင် ထူးအိမ်သင် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် မိသားစု ဆွမ်းကျွေးအလှူ မှာ တွေ့ရတဲ့ မိကွန်ထော ဓာတ်ပုံမြင်ရတော့ ထူးအိမ်သင် သမီးလေးတောင် အရွယ်ရောက်ပါပေါ့လို့ တွေးမိတယ်။ တပါတည်း သူ့အဖေ၊ သူငယ်ငယ် လူမမည် အရွယ်ကလေးတုန်းကတည်းက “သမီးကို သိုင်းသင်ပေးချင်တယ်၊ သမီးအရွယ်ရောက်လို့ သူကိုယ်တိုင် သဘောတူလို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးဘူး..၊ ဒါပေမယ့် သူမနှစ်သက်၊ အလိုမတူတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ဦးဦးက အင်အားသုံးပြီး အနိုင်ကျင့်ခံရမှာကိုတော့ စိုးရိမ်တယ်..၊ “ လို့ ပြောဖူးခဲ့တဲ့ စကားကိုပါ သတိရမိတယ်..။ တဆက်တည်း သိုင်းပညာရပ်ရဲ့ လူငယ်တွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှု ကျေးဇူးကို ဆက်လက်တွေးမိလာတယ်..။ သိုင်းပညာဟာ အပေါစား ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတဲ့ အတွက်...
ဂေါ်ရှယ် ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၂ စိတ်ပင်ပန်းမှု ခံစားရချိန် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှု ကြုံတွေ့ရချိန် ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာတခုပြုစားခံရချိန် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို အားပါးတရသီဆိုလိုက်တဲ့ခါ … စိတ်ခံစားမှုတွေသက်သာ လျှော့ပါးပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့တယ် ….။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကစိတ်ကို ကုစားပေးတယ် စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ် စည်းစနစ်ကျစေတယ် စိတ်ကို တက်ကြွစေတယ် လူ့ဘဝတခုကို တဆစ်ချိုးစေခဲ့တယ် အခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ် ….။ အိမ်ကိုလွမ်းရင်း သီချင်းဆိုတယ် ပျော်ရွှင်နေလည်း သီချင်းဆိုတယ် အသဲကွဲတော့ သီချင်းဆိုတယ် သီချင်းဆိုရင်းနဲ့လည်း တိုက်ပွဲဝင်တယ် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကြောင့်ဘဲ ကမ္ဘာမြေကြီးကျန်းမာနေဆဲ ….။ No tags for this post. Related posts No related posts.
အောင်ဝေး ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၂ illustrator – Ko Myoeသထုံလမ်းက ရမ်းရမ်း ရော်ရော် ခေါ်သံ တစ်စ မိုးရေဆမ်းတဲ့ ည။ တဖျပ်ဖျပ်နဲ့လှပ်လှပ် မှုန်မှုန် ရွေ့တယ်ဆိုရုံကလေး။ မန္တလေးဆောင်ရှေ့ သစ်ရွက်လေဝှေ့ငါတွေ့လိုက်ရတဲ့ တစ္ဆေ။ အလို- တစ္ဆေ တစ္ဆေ သူ့မျက်နှာမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ပါလား။ အို ခြင်္သေ့တံခါး သူသွားဖွင့်နေပါလား။ ည၏နတ္ထိ လမ်းအဓိပတိ ဘယ်သူမှ မရှိ တစ္ဆေနဲ့ ငါ မေတ္တာမျှမိ။ ငါ ။ ။ ခင်ဗျား သေဆုံးလား … ကျဆုံးလား။ တစ္ဆေ ။ ။ ကျဆုံး။ ငါ ။ ။ ခင်ဗျား...
Mandalay Phone Gyi – ဘာသာညီအစ်ကိုများ
ဘာသာညီအစ်ကိုများ မန္တလေးဘုန်းကြီး ၊ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၂ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဘာသာကြီး လေးရပ်အနက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ပေါင်း ခြောက်ထောင်ရှိရာ ခရစ်ယန်ဘာသာ သန်းပေါင်း ၂၁၀၀၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ သန်းပေါင်း ၁၃၀၀၊ ဟိန္ဒူဘာသာ သန်းပေါင်း ၁၀၀၀၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သန်းပေါင်း ၃၇၆ သန်း ဟု စာရင်းကို တွေ့ဖူး၏။ ကျန်ဦးရေတစ်ချို့ ဘာသာမဲ့နေကြ၏။ တစ်ချို့ နတ်ကိုးကွယ်၏။ ဤသို့ကြားဖူး၏။ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး လေးတိုက် အာရှ တိုက်၊ ဥရောပတိုက် စသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ် ဘာသာစုံပြန့်နှံ့လျက်ရှိ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက် ဗုဒ္ဓဘုရားက မေတ္တာကို အထူးဦးစားပေး ဟောခဲ့သော်လည်း တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည်...
ပညာမြင့်မှ လူမျိုးတင့်မယ်ဆိုလျှင် ဒေါက်တာဓမ္မပိယ။ ဇူလိုင် ၂၊ ၂၀၁၂ စုိုးမိုးရေးနဲ့ လုိုက်နာကျင့်သုံးရေး ယနေ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တိုင်းပြု၊ ပြည်ပြု ပေါ်လစီများသည် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ၌ အရေးပါလှသည်။ နိုင်ငံရေးပေါ်လစီ၊ စီးပွားရေးပေါ်လစီ၊ ကျန်းမာရေးပေါ်လစီ၊ ပညာရေးပေါ်လစီ-စသည်ဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာတွေက များလွန်းလှသည်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ စံနစ်တကျ အသွင်ကူးပြောင်း နိုင်ရေးအတွက် ပေါ်လစီအရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ် ပေးလျက်ရှိသော်လည်း ပြည်သူများအပေါ် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်သူများမှ ဥပဒေကို လိုက်နာကျင့်သုံးရေးအပိုင်း၌ ချိန်ခွင်လျှာ မညီမျှသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း။ မြန်မာလူမျိုးနှင့် မြန်မာလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်သော ဘာသာတရားကြောင့်ပေလော။ သို့မဟုတ် စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့နှင့် အနေကြာလာခဲ့၍ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ခက်ခဲနေခြင်းမျိုးလော။ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး၌ ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို မြန်မာပြည်သူ၊...
ဆဲဗင်း ဇူလိုင် ကျောင်းသားအရေးအခင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းထွက်ရှိ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ အင်တာနက်နှင့် အီးမေးများကတဆင့် လက်ခံရရှိတဲ့ “ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှု တရားခံဘယ်သူလဲ” အမည်နဲ့ ဆောင်းပါးကို “ဘိုးသိန်း” က ရေးသားပြီး ဖြန့်ချိလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၁၉ ၆၂ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်၊ ကျောင်းသားအရေးအခင်း နှစ် ၅၀ မြောက် ရွှေရတုအထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါးဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၄၅ မျက်နှာရှိတဲ့ စာတမ်းမှာ စာရေးသူဟာ အဲသည်တုန်းက အသက် အစိတ်အရွယ် ဆေးသိပ္ဗံတန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ် ရှိတဲ့ ဆရာဝန်ကြီး...
အရှင်ပညာနန္ဒ ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၂ • ဘွဲ့တော် – ဦးခေမိန္ဒ • သက်တော် – (၃၃) • မွေးရပ်ဇာတိ – ပန်နိမ်ကျေးရွာ၊ နားငွေးအုပ်စု၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ လားရှိုးခရိုင်၊ ရှမ်း/မြောက်။ • အဖမ်းခံရစဉ်နေသည့်ကျောင်း – သိမ်ကျောင်း၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ • ပုဒ်မ – ၅ (ည)/ ၄၄၀/ ၂၉၅/ ၂၉၅ (က) • ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ် – (၁၅) နှစ် • ထောင်မှလွတ်သည့်နေ့ – ၁၂.၁၀.၂၀၁၁ • နေခဲ့ရသည့်ထောင်အမည် – အိုးဘိုထောင်၊ (မန္တလေးမြို့) • နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ် ဦးဇင်းအနေနဲ့ကတော့...
Page 549 of 572«1...547548549550551...572»
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Ignorant https://t.co/tRHNR3oKyo https://t.co/LHaGV2pwWu about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite